အဆိုပါ Tailoress အကြောင်း – အဆိုပါ Tailoress
မိန်းမတို့အဘို့မူထူးခြားတဲ့အပ်ချုပ်ပုံစံများ, ကလေးများနှင့်နေအိမ်! ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးချက်ချင်းလုပ်ရမှဒစ်ဂျစ်တယ် PDF ကိုအပ်ချုပ်ပုံစံများဖှယျ Find!
Womenswear PDF ကိုအပ်ချုပ်ပုံစံများဗြိတိန်အရွယ်အစား၌ရှိကြ၏ 4-18 (အရွယ်အစားဇယားသင်သည်သင်၏စံပြအရွယ်အစားကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့ထည့်သွင်း). အရွယ်အစားအတွက် Childrenswear PDF ကိုအပ်ချုပ်ပုံစံများမှမွေးကင်းစ 14 အသက်အနှစ်!
အဆိုပါ Tailoress ပိုင်းတွင်ငါပြည်တွင်းဖြစ်ကိုဆက်ကပ်ဖို့အသုံးပြုသောငါ၏အတန်း join ဖို့ဘယ်လိုအပ်ချုပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေနေသကဲ့သို့လူတို့အဘို့တခုသတင်းအချက်အလက်အမှတ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖန်တီးခဲ့. ဒါဟာကတည်းကငါ့အလေးနက်ပုံစံစိတ်အားထက်သန်သို့စိုက်ပျိုးနှင့်ငါ့ဖန်တီးမှု့အပ်ချုပ်စ​​တူဒီယိုထက်ထပ်မံသွားစေငါ့ကိုထွက်ပေါက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်. ငါသည်ငါ့စိတ်ကူးအခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဖြစ်လာသည်နှင့်အဘယ်သို့သူတို့ကအနက်ကိုဘော်ပြခြင်းငှါအဘယ်သို့ထင်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်တဲ့ပုံစံရောင်းချတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်.
ငါသည်ငါ့ပုံစံများနှင့်၎င်းတို့၏လဲ tutorial အသီးအသီးမှအဖြစ်အများကြီးအသေးစိတ်နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုဆက်ကပ်ဖို့ကြိုးစား. တစ်ခုချင်းစီကိုပုံစံအ CAD ရေးဆွဲပုံစံဖိုင်တွေအတူလိုက်ပါဖို့ဖော်ပြချက်နှင့်အတူအပြည့်အဝအရောင်ပုံရိပ်တွေရှိတယ်. ကျယ်ကျယ်ပုံစံဖြတ်တောက်နှင့်ဂမ်နှင့်ထက်ပိုပြီးအဘို့အလက်ဖြင့်သူတို့ကိုရေးဆွဲပြီးလျှင်လေ့လာဘဲလျက် 10 အနှစ်, သူတို့ကိုငါ recreating အခြားသူများတစ်ရိုးချဉ်းကပ်မှုပေးစေခြင်းငှါအကြှနျုပျ၏စွမ်းရည်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုခံစားရ.